Uchwepheshe we-Semalt On Infection Malware Ukuvimbela
Uma izinhlelo zethu zekhompiyutha zinciphisa noma ziziphatha ngokungavamile, kufanele sihlole ukuthi kunegciwane noma cha. Ngokuvamile, abantu abaqondi ukuthi amadivaysi abo ekhompyutha aphethwe yi-malware noma amagciwane abangela ukulimala okukhulu. Inani elikhulu labaduni likuthumelela ama-imeyili asolisayo bese uzama ukukugibela ngenye indlela noma enye.
Noma kunjalo, akukho okukhathazayo mayelana nokuvikela kwakho idivayisi ngokugcina engqondweni izinto ezilandelayo ezihlinzekwa ngu-Oliver King, iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende Semalt .
Hlola impilo yakho yesayithi
I-Google ikhuthaza abasebenzisi bayo kanye nabaphathi bewebhu ukuba benze ucwaningo olufanele. Izici ezihlukahlukene ze-Google ne-Search Console zingakusiza ukuthi ubone izimpikiswano ezingenzeka phakathi kwamaminithi. Isibonelo, ungazama ukusesha isayithi le-Google ukuhlola lokho okukhokhelwe khona kuze kube manje. Umqondo omuhle kubaphathi bewebhu ngoba bangaqiniseka ukuthi izinto zihamba kahle. Kubalulekile ukuthi ukhawulele usesho lwakho kumakhasi athile kuphela. Isibonelo, uma injini yokusesha ibheka amakhasi weBlogspot, ungawaqondisa kabusha emakhasini afanelekayo futhi avikelwe kuphela. Amakhasi we-Search Queries ahlunga inani elikhulu lamagama angukhiye e-Google atholakala kuwebhusayithi yakho. Uma ubona ukuthi amanye amagama angukhiye angalindelekile avuliwe, sekuyisikhathi sokuvimbela konke ngaphambi kokuphuza kakhulu futhi isayithi lakho liye lahlekelwa. Amakhasi we-Security Issues ahlunga izixhumanisi zesampuli zewebhu nesimangqangi ezingase zibe nezinkomba ezinonya. Ukukhethwa njenge-Google okukhethwa kukho kuvumela abasebenzisi bayo ukuba babone ukuthi iGoogle iyakhamba..Uma ubona ukuthi ishaya ikhasi elinesifo, kufanele ususe ohlwini lwakho ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Kubalulekile ukuthi uqaphele iwebhusayithi yakho njalo. Ngaphandle kwalokhu, kufanele ukhethe amaphasiwedi aqinile njenge-webmaster. Ungahlola imihlahlandlela ye-Gmail yokukhetha amaphasiwedi aqinile. Ukukhetha abahlinzeki bokuqukethwe be-third party kungumqondo omuhle, kodwa kufanele wenze lokho ngokucophelela futhi uqinisekise ukuthi abakunikezi ngokuphindaphindiwe nokukopishwa okuqukethwe ngoba kungalimaza iwebhusayithi yakho kakhulu. Kufanele uxhumane nomhlinzeki wakho we-hosting noma webhubhu ukuze uthole ukwesekwa okuqhubekayo kanye namathiphu wokuthi ungahlala kanjani uphephile kwi-intanethi. Eziningi zezinkampani zinikeza amakhasimende abo izibuyekezo ezijwayelekile mayelana nendlela yokugcina amakhasi nama-akhawunti abo ephephile. Uma amakhasi akho noma amawebhusayithi anezibonelelo ze-RSS, kufanele umeme abantu abaningi ukuba babhalise. Ngenkathi usebenzisa i-intanethi, kufanele wenze izikhungo zokusebenza zakho zendawo zivuselelwe futhi ufake izinguqulo ezintsha zesofthiwe ukuhlanza amagciwane namaTrojans.
Abaphathi beWebhu abane-access server
Kufanele uhlole ukumiswa kwe-server yakho njalo. I-Apache inezincebiso ezihlukahlukene zokuthakazelisa zokuphepha kubasebenzisi bayo, futhi iMicrosoft nayo inehlu lwezinsiza ze-tech ukuze ukhululeke. Buza abasebenzisi babo ukuba banakekele ukuthunyelwa kweziqondisi, ukubethela, nokuqinisekiswa kwamawebhusayithi. Kumele futhi wenze amakhophi wokulondoloza amafayela akho ukuze angalahleki ngisho nalapho iwebhusayithi yakho iphikisiwe. Kubalulekile ukuthi wonke umsebenzisi ahlale ebuyekezwa nge-software yesimanje futhi aziswe mayelana nama-patches kanye nezinguqulo ezintsha. Kukhona amathuluzi amaningi nesofthiwe ekusiza ukuthuthukisa iwebhusayithi kungakapheli amaminithi, kodwa ukukhetha ithuluzi elibalulekile kubaluleke kakhulu kodwa kubalulekile njengoba kunezinketho ezihlukahlukene lapho. Kumele uhlale unake kuwo wonke amafrekhi nezandiso. Uma amanye amafayela ekuqondisa ezindaweni ezingaziwa, kufanele ususe ohlelweni lwakho lwekhompyutha ngokushesha ngangokunokwenzeka. Kufanele uhlole amawebusayithi akho ngokukhubazeka okuvamile futhi ugweme ukuba nencwadi evulekile imvume
I-Google ithi kufanele sisebenzise i-SFTP ne-SSH ngokudlulisa idatha. Zombili lezi zinhlelo zigcina amasayithi akho ephephile ezinsongweni ezingenzeka. Ibhulogi ye-Google Online Security inikeza amathiphu amaningi mayelana nokuphepha nokuphepha kwe-inthanethi, ngakho kufanele uyihlole njalo.